Codsiyada iftiinka ledhka, alaab-qeybiyaha mashruuca iftiinka iftiinka | Huayi Iftiin
Guriga > Mashruuca
Huayi Lighting waxay khibrad aad u weyn u leedahay mashaariicda iftiinka LED ee kala duwan oo ay ku jiraan ganacsiga, warshadaha, hoteelka, garoonka diyaaradaha, xarunta wax iibsiga, deegaanka, xafiiska, iwm.
Waxaan leenahay R xoog leh&D iyo awoodda wax-soo-saarka oo leh koox-fulin mashruuc oo xirfad leh. Isagoo ka hadlaya bixinta alaab tayo sare leh, Huayi Lighting wuxuu awoodaa inuu abuuro xalal nalalka LED-ka heerka koowaad iyadoo loo eegayo sifooyinka mashruucaaga. Huayi Lighting ma aha oo kaliya inay ka go'an tahay inay siiso dadka isticmaala xalal nalalka LED-ka ah ee hal-joojin ah, laakiin sidoo kale waxay sahamisaa xiriirka ka dhexeeya iftiinka iyo booska si loo horumariyo alaabada moodada iyo kuwa caadiga ah si dadka ku habboon.'s baahida iftiinka ee xaalado kala duwan. Sida xariijinta iftiinka LED, nalalka qolka, nalalka LED ee saqafka, ect.
Cuman-Hormuz Grand Hotel
Hormuz Grand Hotel waa huteel qaali ah oo ku yaal Muscat Cuman, Huayi waxa uu bixiyay dhammaan nalka qurxinta iyo iftiinka horseedka ee qolalka martida iyo goobaha dadweynaha.
St Regis Hotel, runtii mid gaar ah. Juquraafi ahaan aad u wanaagsan, Maldives waxay noqotaa mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan adduunka ee dalxiiska. Qolalkan raaxada leh waxay ku yaalliin jasiiradaha gaarka loo leeyahay ee atolls ee Maldives, waxay soo jiitaan martida inay yimaadaan oo ay sahamiyaan mucjisooyinka dabiiciga ah iyo qaabka kala duwan ee noolaha badda.
Kempinski Hotel Dubai oo isku xira suuqa Emiras, qolalka hoteelka ee leh qurxinta raaxada waxaa lagu qalabeeyay musqul marmar ah, shaashad LCD ah oo weyn iyo meel lagu cunteeyo. Qolalka qaarkood waxay iska indho tiri karaan Dubia Ski Village.
Hudheelka Le Méridien waxa uu daaha ka rogaa tahriibiyaha maskaxda leh ee xiisaha leh iyo hal-abuurka leh khibradaha lama filaanka ah ee ugu lama filaanka ah ee meesha loo socdo ay tahay inay bixiso. Ku xididaystay da'da dahabiga ah ee safarka, Le Méridien ayaa weli ah meel ay dadku isugu yimaadaan si ay ugu farxaan helista meelaha adduunka oo dhan. Noocyada raaxada ee ugu fiican adduunka oo leh abaal-marin ka sii wanaagsan.
Bangladesh -Afar dhibcood waxaa qoray Sheraton Dhaka
Afarta Qodob ee ay leedahay Sheration Dhaka, Gulshan waxa ay bixisa marin u helka degmada ganacsiga iyo deegaanka. Xafiisyada, dukaamada tafaariiqda, iyo makhaayadaha ayaa jaranjaro u jira huteelka, aagga diplimatiga ahi waxa uu leeyahay safaarado iyo guddiyo sare. Hudheelku waxa uu ka kooban yahay 149 qolal marti ah oo casri ah iyo suuliyaal leh dhammaan raaxada guriga, oo ku yaal dabaqa 12aad iyo wixii ka sareeya, taas oo hubinaysa aragtida muuqaalka magaalada. Ka sokow, dhismahan munaaradda casriga ah wuxuu tusaale u yahay raaxada oo leh tas-hiilaadyo kala duwan. Xarunta jirdhiska waxay soo saartaa qalab caqli badan iyo macalin xirfad leh. Ka fiirso muuqaalada cajiibka ah ee skyline-ka barkada dabaasha ee Sky Deck.
Hilton Astana, oo ah huteel casri ah oo ku dhex yaala dhismaha mustaqbalka EXPO-2017. Ku raaxayso adeeg heerkiisu sarreeyo intaad halkan joogto iyo sidoo kale adeegyo maskaxeed sida isboorti fayoobaanta, baarka saqafka sare, xarunta jimicsiga, barkadda gudaha, Qolka fulinta iyo tas-hiilaadka shirarka ballaaran. Waxay ku dhex taal meel aan ka fogeyn bartamaha magaalada, xafiisyada shirkadaha, waaxaha iyo wakaaladaha Dowladda Kazakhstan, iyo Gegida Caalamiga ah ee Astana.
Marriott international waa sumad guulaysata oo ku xidhan maamulka huteelada kaas oo maamula 2,600 huteelo aduunka oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, kaliya 29 ka mid ah ayaa si toos ah loogu maareeyaa JW, taas oo u dhiganta astaanta hoteelka ugu raaxada badan. Huayi Lighting Group waxay ku faraxsan tahay inay iskeed isu soo bandhigto inaan sharaf u leenahay inaan ka qayb qaadano mashruuca ugu raaxada badan darajada sare.
Hindiya-Phoenix Suuqa Magaalada
High Street Phoenix, oo hore loo yiqiin Phoenix Mills, waa mid ka mid ah suuqyada wax iibsiga ee ugu weyn Hindiya, oo ku yaal Lower Parel, Mumbai. Dhulkeeda guud waa 3,300,000 cagood oo laba jibbaaran. Mallka ka sokoow, compond-ku waxa uu leeyahay huteel 5-xiddigle ah, goob dhuxul ah, goob dhuxul ah iyo taawar la dego.
Sida dhismaha caanka ah ee Weligama Bay ee Sri Lanka, aad bay muhiim u tahay in la hubiyo saameynta iftiinka qumman.Huayi waxay bixisay dhammaan xalalka iftiinka iyo alaabta, oo ay ku jiraan nalalka LED-ka iyo nalalka qurxinta gudaha iyo dibadda labadaba.
Shiinaha-Studio Magaalada Macau
Tani waa calaamad leh taayirrada ugu sarreysa Aasiya - Studio City Macao waxayna la wadaagtaa hoteello, xarumo dukaamo, casinos iyo suuqa cuntada. Huayi, khabiirka dhammaystiray mashaariic casino badan oo raaxo leh oo ku yaal Macau, ayaa sidoo kale ka qaybqaatay qaybaha iftiinka. Wadashaqeyn qoto dheer oo lala yeesho naqshadeeyayaasha, saameynta iftiinka ku qanacsan waxay heshay qadarin sare oo Huayi mar kale.